Denmark oo hor istaagtay qaxooti ku soo wajahan Sweden | Somaliska
Tareenada iyo wadooyinka isku xira Denmark iyo Germany ayaa shalay la joojiyay ka dib markii ay dhowr boqol oo qaxooti ah diideen in ay ka degaan tareen ay la socdeen oo ay iska dhiibaan Denmark. Qaxootiga ayaa sheegay in ay u socdaan Sweden balse Denmark ayaa diiday in ay gudbaan.
Booliska Denmark ayaa dhamaan joojiyay tareenada isku xira xuduuda Germany iyo Denmark ee magaalooyinka Puttgarden iyo Rödby. Qaxootiga ayaa diiday in ay tareenka ka degaan, halka qaar kale ay duurka ku carareen. Qaar ayaa xitaa la arkay iyaga oo lugaynaya hareeraha wadada, iyadoo qaarkood ay soo qaadeen dad mutadawiciin ah oo baabuur wata. Taasi ayaa keentay in Boolisku ay guud ahaan xiraan wadada isku xirta Germany iyo Denmark.
Qaxootiga ayaa diidan in ay iska dhiibaan Denmark oo ah wadan aan laga jeclayn magan-galyo doonka isla markaana aan sharciga bixin. Qaxootiga ayaa ku socda Sweden oo hada dhamaan qaabilaad siisa qaxootiga ka imaanaya Syria isla markaana bixisa dhaqaale fiican. Ugu dambeyntii ayaa 100 qof laga dhaadhiciyay in ay isk dhiibaan Denmark halka inta kale ay tareenka u soo raaceen Copenhagen.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Malmö ee xuduuda Sweden iyo Denmark waxaa soo gaaray boqolaal qof oo qaxooti ah kuwaasoo ka soo gudbay Denmark. Qaxootiga Syria ayaa hada inta badan waxay iska dhiibaan Germany oo balan-qaaday in dhamaan cidii Syria ka timaada la siinayo sharciga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan naqdo saxafi inaad iga caawisan ayaan jeclahay
Aleelahay wax ay diidaan ayey arkeene wax diidana ha arkaan yurub yadaa dadka ubaahan wadamo badan taas oo kale halagu dhigo
waa qiyaame hadiiba carbtii sidaa ay lug ku galyaan yurb oo ay waliba dhib kala kulmyaan waxaad layaabto marbaad la kulantaa waayo siday somaali ula yaabyen oo ay markii qof tahriba uu suriya maryo ama libiya ama yamen daac daasi iyo jirdil iyo nagha oo ay kufsadaan haduu ilaahy ka jary oo ay yurb kabhoda ku tageen somali waxba raci jireen donyo ama. ama diyarad ilaahy muslunka ha quweyo mel no danbyinto allaa garn dadka somaliya ka carayaw wadankinaa idin baahn dhib wayin oo laga caraaa ma yaalo melaha qaar
Horta ma ogtihiin in Denmark eey lacago badan siisay joornalo kasoo baxa wadanka Libanon, sideey digniin ugu diraan qaxootiga syrianka oo kusoo socda wadankooda. wexeyna ku qoreen joornalada in wadanka Denmarka sharciyadii qaxootiga lasii adkeeyay oo eysan fududeyn si sharci loohelo.
Haa’ Nyhet in wararkaas webka uu qoray ahayd ma aqaano wararkaas halkay ka dhaafeen.shuruudaha Denmark Carabta u dirtay waxaa ka mida 1: in qofka LA siin doonin sharci ilaa dalka uu qaxoonti Ku dhex ahaado 5 sano 2. In Caydha LA qaafanayaa ay Tahay mid aad U year 3: in ay adagtahay midaynta qoysaska.